Isixeko saseHoopa nguGqirha Panda, simahla ixesha elilinganiselweyo | IPhone iindaba
Kwakhona sithetha ngomdlalo wento encinci yendlu, umdlalo owenzelwe abantwana ukusuka kwiminyaka emi-6 ukuya kweli-8 yonjiniyela uGqirha Panda, umphuhlisi owenza ngokuthe ngcembe umsantsa phakathi kwee-greats zeVenkile yeApple ngeToca Boca. Ngeli xesha sithetha ngomdlalo ISixeko saseHoopa, umdlalo onamaxabiso aqhelekileyo kwiVenkile ye App yee-euro ezingama-2,99 kodwa okwexeshana sinokuyikhuphela simahla. Kule mdlalo abantwana abancinci kufuneka bayile kwaye bakhe iHoopa City bedala iindlela, izindlu, iivenkile, izikhululo zegesi ...
NgesiXeko saseHoopa abantwana bethu abancinci kuya kufuneka basebenzise ukucinga kwabo ukwakha ukusuka kwidolophana encinci ukuya kwisixeko esikhulu, bedibanisa zonke iinketho ezibekwa ngumdlalo. Ngokudibanisa izinto ezahlukeneyo unokwakha izinto ezingafumanekiyo ngqo kumdlalo, ezinje ngezitishi zegesi, iifama ... Njengayo yonke imidlalo evela konjiniyela, umdlalo awuyi kuphazanyiswa ziintengiso okanye amandla okuthenga ngaphakathi kuyo.
Iimpawu zeSixeko saseHoopa
Yakha isixeko sakho, nangona uthanda njalo!
Dlala ulinge ngezinto ezisi-7 ezinjengamanzi, umbane kunye nezitena
Fumanisa zonke izakhiwo onokuzakha!
Gcina izixeko ezininzi! Ukuba ufuna ukwakha isixeko esitsha, kuya kufuneka uye kwiscreen sokuqala. Izixeko ziya kugcinwa ngokuzenzekelayo.
Incwadana yeHoopa iya kugcina ngokuzenzekelayo indibaniselwano yezakhiwo osele uzifumene. Xa usakha isakhiwo esitsha, ungakhangela indibaniselwano kwincwadana yemigaqo kwicala lasekunene lasekunene.
Uya kuba nakho ukwazi ukuba zeziphi izakhiwo osele uzakhile kwaye zeziphi ongekazifumani.
Dlala ngendlela ofuna ngayo. Akukho mida yexesha okanye imithetho engqongqo!
Akukho kuthengwa kwangaphakathi nohlelo okanye intengiso yomntu wesithathu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iapps zokusebenza » IPhone imidlalo » Isixeko sikaGqirha Hoanda, simahla ixesha elilinganiselweyo
Urhulumente waseIndiya uthenga itekhnoloji esetyenziselwa ukuqhekeza ii-iPhones